रसुवागढी र तातोपानी नाका खुलाउने विषयमा चीनको सकारात्मक जवाफ
2022-03-28 08:03 Desk
काठमाडौं १४ चैत्र। नेपालले कोरोना महामारीसँगै अवरुद्ध रसुवागढी र तातोपानी नाका खुलाउने विषयमा चासो दिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको छुट्टाछुट्टै भेटमा नाका सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपालसँगका अवरुद्ध नाका सञ्चालन गर्न सकारात्मक जवाफ दिएको नेताहरूले बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा सहभागी एमाले नेता डा. राजन भट्टराईका अनुसार ओलीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना छिटो अघि बढाउन पनि चीनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ‘बीआरआईअन्तर्गतका योजनाहरू अघि बढाउन तथा रेल विद्युत्, सडक र नाका व्यवस्थित गर्ने आयोजनामा चीनको सहयोग होस् भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको छ, भट्टराईले भने।
कोभिड नियन्त्रणका लागि चीनले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै ओलीले कोभिडका कारण चीन अध्ययनमा जान नपाएका विद्यार्थीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा पनि विदेशमन्त्री वाङको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। हुम्लाको सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई घर फर्किने वातावरण बनाउन, कोरोला नाकाको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिन पनि ओलीले आग्रह गरेका थिए।
ओलीले मुस्ताङको कोरोला नाकामा नेपालतर्फको संरचना निर्माणमा सहयोग गरी दिन आग्रह गर्दै चीनतिरकै जस्ता संरचना नेपालमा पनि निर्माण गरी दिन आग्रह गरेको डा. भट्टराईले जानकारी दिए। ओलीले राखेका विषयमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले ‘समाधान गर्न पहल हुन्छ। समाधानको प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्न सक्छ। चीन तपाईंले भनेका सबै विषयमा सकारात्मक छ, भन्ने जवाफ दिएका थिए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँगको भेटमा विदेशमन्त्री वाङले कोरोनाको कारण चीनबाट आउनुपर्ने सहयोग नआउँदा नेपालले धेरै समस्या भोग्नुपरेको बताएका थिए। माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले भेटबारे जानकारी दिँदै भने, ‘व्यापारिक नाकाहरू बढाउने र अहिले भइराखेकालाई थप व्यवस्थित गर्न अध्यक्षले अनुरोध गर्नुभयो। विदेशमन्त्री वाङले रसुवागढी र तातोपानी नाका खोल्न चीन सकारात्मक भएको
रसुवागढी मात्र नभई अन्य नाका सञ्चालनबारे पनि चीन सकारात्मक रहेको जवाफ विदेशमन्त्री वाङले दिएको बस्नेतले बताए। भेटमा दाहालले चीनविपरीतका विषयमा नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा वाङले आइतबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालका अनुसार भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपाल र चीन असल छिमेकी रहेको र यस प्रकारको उच्च तहको भ्रमणले सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन्। वाङ आइतबार नै स्वदेश फर्किएका छन्।
« स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला भन्दा बढी पुरुष मतदाता
निर्माण सम्पन्न नभएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको चिनद्वारा साँचो हस्तान्तरण »